Liverpool oo qarka u saaran inay Janaayo dalab u dirto weeraryahanka Celtic Tony Watt. - Caasimada Online
Home Warar Liverpool oo qarka u saaran inay Janaayo dalab u dirto weeraryahanka Celtic...
Liverpool oo qarka u saaran inay Janaayo dalab u dirto weeraryahanka Celtic Tony Watt.
Liverpool ayaa lasoo werinyaa inay ka fikireyso si ay ula soo saxiixato da’yarka kooxda Celtic Tony Watt ka dib markii ay wakiilo daawada u dirtay weeraryahanka. Sida uu qoray wargeyska Caught Offside.
Tababre Brendan Rodgers ayaa doonaya inuu inuu dalab u diro 18 jirkaan ku dhashay Coatbridge, xilli uu xidiga ku jira ciyaartoyda ka yar 21 jirada Scotland uu gool ka dhaliyey kooxda Barcelona ka dib markii ay kooxdiisu ka gaartay guul taariikhi ah.
Liverpool ayaa xidigaan xaaladiisa la socotay dhowr bilood laakiin waxaa ku dhalatay inay lasoo wargeegaan ka dib markii uu 10 daqiiiqo isku baray Catalan, waxaana laga yaabaa in Janaayo ay dalbato kooxda ka dhisan gobolka Merseyside.
Reds ayaa ka dhibaatooneysay dhanka weerarka iyadoo hada uu yahay weeraryahankooda keliya Luis Suarez iyo Fabio Borini oo dhaawac qaba
Caasimada – Somalia.